अहिले समाज बद्लिएको छ । बच्चाका लागि यौन सम्पर्क गर्ने पुरातन धारणा फेरिएको छ । सन्तानका लागि बच्चा जन्माउनैपर्छ भन्ने मान्यता पनि ध्वस्त हुँदैछ । केवल उन्मुक्त यौनको आनन्द लिने संस्कृति एकातिर विकास हुँदैछ भने अर्कोतिर विवाह नगरी नै सन्तानका माता वा पिता बन्ने
- डा. राजेन्द्र भद्रा यस्तो अवस्थामा यौनसम्र्पक गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? यौनसम्पर्कबाट लिने आनन्द अरू कुनै उपायबाट लिन सकिँदैन ? अनि बढी हस्तमैथुनले केही असर गर्छ कि ? तपाईंका सन्देशका आधारमा तपाईं विवाहित हुनुभएको अनुमान गरेका छौं र हस्तमैथुनको कुरा पनि विवाहित
इण्डोनेसियामा एउटा अनौठो परम्परा रहेको छ । त्यहाँ हरेक वर्ष महिलाहरुले अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्पर्क कायम गर्दछन् । अझ रोचक त के भने विवाहित महिलाले कुनै अपरिचित पुरुषसँग बनाउने यौन सम्बन्धमा उनीहरुका लोग्नेले पनि सहयोग गर्दछन् । १६ औँ सताब्दीदेखि यो परम्परा
आफ्नो पार्टनरसँगको समयलाई सुखमय बनाउनको लागि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने अन्तिम कुरा भनेको खानेकुरा हो । यौन सम्पर्क गर्नुअघि तपाईले के खानुहुन्छ भन्ने कुुराले तपाईको यौन सम्पर्कको अनुभवलाई निकै प्रभाव पार्न सक्छ । तपाईले खाने सामान्य खालको खानाले पनि पेटको खराबी
महिलाहरुले सेक्सका बेला
कुन मानिसलाई कस्तो खालको यौन सम्पर्कको शैली मन पर्दछ भन्ने कुरा समग्रमा भन्न गाह्रो हुन्छ, किनकि मानिसका रुची फरक फरक हुनसक्छन् । हालै एउटा अनलाइन डेटिङ साइटले यस विषयमा अनलाइन सर्भेक्षण गरेको छ । महिलाहरुलाई यौन सम्पर्कका बेला के गरेको मन पर्दछ रु कस्तो खालको
यौन सम्पर्क दुनियाँको सबैभन्दा प्राचीन र सार्वभौमिक चलन हो । तर संसारका विभिन्न देशमा सेक्सका तरिकाहरुमा निकै विविधता छ । बीबीसीको एक कार्यक्रम क्रसिंग कन्टिनेन्टले यस विषयमा शोध गरेको थियो । त्यसक्रममा यौन सम्बन्ध कायम गर्नका लागि के–के सम्म गरिन्छ भन्ने
भारतमा एक गर्भवती बाख्रालाई मानिसहरुले सामूहिक बलात्कार गरेको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चर्चामा आयो । हरियाणाको मेवात इलाकामा २५ जुलाईमा गर्भवती बाख्राको सामूहिक बलात्कार भएको थियो । र, त्यसको भोलिपल्ट बाख्राको मृत्यु भएको थियो । मेवात प्रहरी
म ३० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हप्तामा दुई पटक श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्छु । यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ । श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन् । यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने
तपाईंलाई लग्न सक्छ कि युवतीहरुले युवक जस्तो यौनको बारेमा बढी कल्पना गर्दैनन् । यदि हो भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । एक अध्ययनले हरेक स्त्रीले आफ्नो जीवनमा केही न केही फरक र उत्ताउलो खालको यौन अनुभव गर्न चाहन्छन् र मौका पाउँदा उनीहरुले अनौठा अनौठा यौनिक अभ्यासको
म र मेरी गर्लफ्रेन्ड २२ वर्षका भयौं। हामीबीच प्रायःजसो कन्डम नलगाई (सेक्सको अन्तमा शुक्रकीट बाहिर फ्यालिन्छ) सेक्स हुन्छ। दुई-तीन महिनादेखि मिन्स पछि सर्ने समस्या भएको छ। जस्तो कि ४ गते हुनुपर्ने नभएर ६ गते त कहिले ७/८ गतेतिर हुन्छ। यस्तो किन भएको होला ? के मिन्स
१। विश्वको सबैभन्दा बलियो योनी रुसकी तातियाता कोजेनिकोभा विश्वकी सबैभन्दा बलियो योनी भएकी महिला हुन् । उनले आफ्नो योनीका मांसपेशीले १४ किलो वजन उठाएकी छिन् । मोटो धागोमा बाँधिएको १४ किलोको वजनलाई उनले धागोमार्फत अठ्याउन सकेकी हुन् । २। सबैभन्दा ठूलो
महिला हस्तमैथुन आफैंलेआफ्नो यौनाङ्ग चलाउने, घर्षण गर्ने वा दबाउने जस्ता क्रियाकलाप गरेर यौन आनन्द प्राप्त गर्ने यौन क्रियाकलाप नै हस्तमैथुन हो । सामान्यत: पुरुषले मात्र गर्ने मानिए पनि महिलाले पनि हस्तमैथुन गर्छन् । किन्सेले गरेको अध्ययनमा सोधिएका मध्ये ९२
इजरायल, इजरायली जेलमा हजारौं प्यालेस्टिनी नागरिक छन् । लामो जेल जीवनको सजाय भोगिरहेका प्यालेस्टिनीहरु आफ्नी पत्नी गर्भवती भएको र सन्तान जन्माएको खबर जेलमै सुनेर दंग परिरहेका हुन्छन् । पति जेलमा रहेकै समयमा कसरी घरमा गर्भवती हुन्छन् पत्नी ? जिज्ञासा जाग्नु
चैत १ – न्यायपरिषद्ले बुधबार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पदमुक्त भएको पत्र थमाएपछि न्याय क्षेत्र एकाएक तरंगित भयो । शीतल निवासमा नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ हुँदै गर्दा पराजुली पदमुक्त भएको पत्र बाहिरिएको थियो । त्यसलगत्तै आएका
सामान्यत महिलाहरु पूरुषको दाँजोमा यौंन सम्पर्क गर्न चाहाना भएपनि व्यक्त गर्न वा बोलेर भन्न सक्दैनन् । यसर्थ यहाँ महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरिन्छ । उनीहरु यौन सम्पर्क गर्ने तिव्र इच्छा हुँदा हुँदै पनि दवाएर राख्ने
स्थानीय गाईको गहुँतबाट १४८ प्रकारका रोग निको हुने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । गाईको घ्यूले बढेको कोलेस्टोरल ठीक गराउँछ । गोरस मुटुरोगमा समेत लाभदायक रहेको तथ्य वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ । रुसी वैज्ञानिक शिरोबीचले मानिसमा हुने
हामी सबैलाई थाहा छ एक ब्यक्ति अर्को भन्दा फरक हुन्छ । मानिस अनुसार रुची पनि फरक फरक हुन्छन् । कसैलाई गुलाफ मन पर्छ त कसैलाई गुराँस । कसैलाई गुलियो खान मन पर्छ त कसैलाई नुनिलो । having sex in bed यसैगरी यौनिक मामलामा पनि मानिसहरुमा फरक फरक गुण र ब्यवहार हुन्छन् । कसैलाई यौन
नाङ्गै बसेर रमाउनको लागि ‘न्यूडिस्ट पार्क’
पेरिस- फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा पहिलोपटक नाङ्गै बसेर आनन्द लिन चाहने प्रकृतीप्रेमीहरुका लागि ‘न्यूडिस्ट पार्क’ खुल्ला गरिएको छ । पेरिसको चरा संरक्षण केन्द्र नजिकै रहेको ‘बोइस डी विन्सेनस पार्क’भित्र निर्माण गरिएको उक्त ‘न्यूडिस्ट पार्क’ सेप्टेम्बर
एजेन्सी । अधिकांशको हकमा यो देखिन्छ कि पुरुषहरु विवाहित वा आफूभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि एकदमै धेरै आकर्षित हुन्छन् । यो पुरुषको स्वभावमा देखिएको छ र अध्ययनमा यसका पछाडी एउटा ठूलो कारण पनि पत्ता लागेको छ ।अध्ययनमा पत्ता लाग्यो कि पुरुषहरु आफूभन्दा बढी उमेरका
डा. समन रुपाखेती यौन परामर्शदाता बीस वर्षीया नवविवाहिता सुहागरातको मीठो कल्पनामा हराइरहेकी थिइन् । तर, त्यो रात उनका लागि ‘जीवनकै ठूलो कालरात्रि’ बनेर प्रवेश गर्‍यो । नवदुलाहा श्रीमान्ले सहवासपूर्वको क्रीडा (फोर प्ले) अगाडि नै सीधै मुखमैथुन गर्न कर गरे । सहज
पश्चिमी भागमा छ केरो रिको पहाड । बोलिभियामा लामो समयसम्म स्पेनी साम्राज्य रह्यो । स्पेनीहरु यस पहाडलाई धनी पहाड भन्थे । किनकी त्यहाँ प्रसस्तै चाँदी पाइन्थ्यो । पूरै पहाड नै चाँदीले बनेको लाग्थ्यो स्पेनीसलाई । तर स्थानीय मानिसहरु भने यो पहाडलाई मान्छे खाने
फेसबुकबाट शुक्रकिट खोजेर पुरुषले जन्माए छोरी
बेलायतमा एकजना पुरुषले बच्चा जन्माएका छन् । हेडन क्रस नामक युवाले छोरी जन्माएका हुन् । ती पुरुष पहिले महिला थिए । आफ्नो लिंग परिवर्तन गरी उनी महिला बनेका थिए । उनलाई बेलायतमा कानूनी रुपमा पुरुषको दर्जा मिलिसकेको छ । हेडनले गर्भाधारण गरी आफुले बच्चा जन्माउनका
ब्वाइफ्रेन्डसँग मिलेर गरिन् युवतीको बलात्कार
प्रसंग अष्ट्रेलियाको शहर सिड्नीको हो, जसले ठूलै खैलाबैला मच्यायो । मंगलबार उक्त घटनाको आरोपमा एक महिला र उनका ब्वाइफ्रेन्डलाई अदालतमा पेश गरियो । अनौठो त के भने ती युवतीले आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डसँग मिलेर १४ वर्षीया किशोरीको बलात्कार गरे । आरोपित युवतीको नाम हो,
थाइल्याण्डमा एउटा त्राशदीपूर्ण कार दुर्घटनामा आइरिस नागरिकको मृत्यु भएको छ । दुर्घटना हुँदा उनी कारको पछाडि सिटमा सेक्स गरिरहेका थिए । मृत्यु हुने ३९ वषिर्य जोन मालोन एक भूतपूर्व अंग्रेजी शिक्षक हुन् । उनी एक युवतीसँग कालो सुजुकी कारमा यात्रारत रहँदा बुधबार
किन युवतीहरु बढी गर्छन् सेक्सको कल्पना ?
युवकहरुले मात्र होइन युवतीहरुले पनि यौन कल्पना गर्ने र त्यसको मात्रा केटाहरुको भन्दा बढी हुने एक अध्यनले देखाएको छ । यद्यपी केटा र केटी दुवैले यौन सम्बन्धी कल्पना गर्दा करिव करिव उस्तै कल्पना गर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ । अधुनिक केटा केटीहरुको यौन सम्बन्धी अधिकाँश
जापानले बनायो बोल्ने यौन खेलौना
हार्मोनी एक नयाँ प्रकारको सेक्स डल हो जो हिँड्न मात्र होइन बोलचाल पनि गर्न सक्दछ । उक्त सेक्स डलको टाउको, परेला तथा ओँठ पुर्णरुपमा तयार त भैसकेको छैन र उसले गर्न सक्ने कुराकानी पनि सिमित मात्रामा छ, तथापि
मे ५ , टोकियो । गुन्योचोलीमा सजिएर गायिका ज्योति मगर स्टेज उक्लिँदा मेगुरो कुमिन सेन्टरमा उपस्थित दर्शकहरु अचम्ममा परे ।प्रायः कार्यक्रममा छोटा पहिरनाका कारण बिवादित हुने गरेकी ज्योतिलाई एक्कासी गुन्योचोलीमा देख्दा दर्शकहरु अचम्म पनि किन नपरुन् त ?
उमेर घर्किँदै जाँदा मानिसमा यौन क्षमतामा ह्रास हुँदै जानु प्राकृतिक कुरा हो । उमेर ४० कटेपछि मानिसमा यौन रुची तथा यौन क्षमतामा पनि कमी हुनु स्वभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा मानिसहरुको यौन जिवन निकै निरस हुने अनुमान गरिने नै भयो । तर एक अध्ययनले भने यस्तो अनुमानलाई
यदि तपाईको फेसबुक एकाउन्ट कसैले ह्याक गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? यसलाई फिर्ता लिन धेरै कठिन छैन । आउनुस्, उपाय थाहा पाउनुस् । सबैभन्दा पहिले मा जानुस् । यहाँ एउटा बटम देखिन्छ जसमा लेखिएको हुन्छ, Your account has been Compromised. यसमा आफ्नो नाम, इमेल र तपाईंको
बेलौरी-चैत्र २०- कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका ६ शान्तिपुरमा जन्मिएका सुरज रावल मोडलिङमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै यवापुस्ता माझ लोकप्रिय बन्न सफल भएका छन। सानै देखी मोडलिङमा केहि गर्ने सोच भएका सुरज विगत दुई वर्ष देखी नेपाली मोडलिङ क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय रहेका
यौनका विषयमा भएका जुनसुकै अध्ययन अनुसन्धान तथा सर्वेर्क्षणहरुमा हाम्रो यतिधेरै रुची किन हुन्छ होला ? यो मानव स्वभाव होला । तथ्यले नै बताउँछ की दुनियामा सबैभन्दा धेरै बिक्ने चिज भनेकै सेक्स र अपराधको विषय हो । सायद त्यहीँ बिकाउ चिज भएर होला दुनियामा यौनका विषयलाई
उनीहरु जुम्ल्याहा हुन् । को दिदी को बहिनी छुट्याउन सकिन्न । अनुहार दुरुस्तै । बानी बेहोरो पनि उस्तै । लवाइ खवाइ पनि उस्तै । यी जुम्ल्याहा दिदी बहिनीको परिचय यतिमा मात्र सकिदैन । तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्न सक्छ, उनीहरुका प्रेमी पनि एउटै हुन् । दुबै जना एउटै पुरुषसँग
माघ १५ – वैज्ञानिकले मानिस र सुँगुरको शुक्राणुको समिश्रबाट भ्रुण बनाएका छन् । मानिसको ० दशमलव ००१ प्रतिशत भन्दा कम र बाँकी सुँगुरको शुक्राणु प्रयोग गरी वैज्ञानिकले भ्रुण बनाएर अध्ययन सुरु गरेका हुन् । मानिस र जनावरको शुक्राणुको समायोजनबाट बेग्लै प्रजाति बनाउन
एजेन्सी – भनिन्छ, महिलाहरु रहस्यका पर्याय हुन् । प्रायः महिलाको जीवनमा कैयन रहस्य र राज हुन्छन्, तर त्यसबारे उनीहरुले कहिल्यै मुख खोल्दैनन् । सोशल मिडियामार्फत हालै गरिएको एक सर्भेमा महिलाहरुसँग सोधिएको थियो, ‘तपाईं के कुरा हाम्रो
तपाइँहरू आफ्नो बेडरुममा भएको बेला यी कुराहरु भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यदि यी कामहरू गर्नुभयो भने तपाइँको सेक्स लाइफनै खतरामा पर्न सक्दछ । १. बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने काम नगर्नुसः यदि तपाइँ बेलुकीको खाना धेरै ढिला खाने गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईंको तौल मात्र
सूचना प्रविधिको तिव्रतर विकाश, समाज तथा संस्कारमा आएको परिवर्तन सँगै पछिल्लो समयमा जिवनशैली समेत बदलिएको छ । जिवनशैलीको परिवर्तनले के बालक, के बुढाबुढी, के तन्नेरी सबैलाई समातेको छ । अहिलेका किशोरकिशोरी अधिकांस इन्टरनेटबाट परिचित छन् । यौनका विषयमा बढि खुलस्त
यौन सम्पर्क भन्ने कुरा प्राकृतिक कुरा हो, त्यस्तै गर्भावती हुनु पनि प्राकृतिक कुरा हो, त्यसैले यि दुईकुरा नै प्राकृतिक कुरा भएकोले दुबैलाई सँगै मिलाएर लान सकिन्छ । लगातार यौन सम्पर्क गरीरहँदा जब महिनावारी बन्द हुन्छ र त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा गर्भ
के तपाईले पनि कुनै परपुरुष वा परस्त्रीसँग संभोग गरिरहेको सपना देख्नु हुन्छ ? वा आफ्नै पतिरपत्नी वा प्रेमीरप्रेमिकाका साथ यौन क्रिया गरेको सपना पो देख्नुहुन्छ कि ? सबैले सपना देख्छन् र सपनामा अनेक कुराहरू साँच्चै भएको जस्तो गरेर अनुभव गरिन्छ । तर सपना यस्तै देख्छु
६७ वर्षमा भाडाकी आमा !
आफ्ना सन्तानको खुसीका लागि आमा बाबुले के सम्म गर्दैनन् ? ग्रिसमा एक ६७ वर्षकी महिलाले आफ्ना छोरीलाई सन्तान सुख दिनका लागि छोरीका लागि भाडाकी आमा बनिदिएकी छिन् । ती वृद्धाले सरोगेसीबाट छोरीका लागि एक बच्ची जन्माइदिएकी छिन् । यो सँगै ६७ वर्षकी अनास्तासिया ओन्टु